मलेसियामा एक नेपाली युवाकाे आयो यस्तो दुःखद खबर – PathivaraOnline
Home > प्रवास > मलेसियामा एक नेपाली युवाकाे आयो यस्तो दुःखद खबर
मलेसियामा एक नेपाली युवाकाे आयो यस्तो दुःखद खबर
admin September 7, 2020 September 7, 2020 प्रवास	0
काठमाडौं । मलेसियामा एक नेपाली युवालाई मृ,त्युद,ण्डको फैसला सुनाइएको छ । चार वर्षअघि एक लरी चालक नेपाली नागरिककै ह,त्या गरेको अभियोगमा ३६ वर्षीय नेपाली युवा सुरजदेव शाह तेलीलाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै मृ,त्युद,ण्डको फैसला सुनाएको हो ।
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका जेल अधिकृत द्वितीय सचिव प्रतिक कार्कीका अनुसार उनलाई मलेसियन पिनल कोडको दफा ३०२ अन्तर्गत गएको १७ अगष्टमा मृ,त्युद,ण्डको फैसला सुनाइएको थियो । उनलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश दातुक मोहम्मद रज्जी हारुनले घट,नामा दो,षी ठहर्याउँदै मृ,त्युद,ण्डको सजाय सुनाएका हुन् ।
तेलीलाई सन् २०१६, डिसेम्वर २ तारिखका दिन विहान १ः३० देखि ४ बजेर ५ मिनेटको बीचमा ३४ वर्षीय हरिथास नाम गरेका नेपाली युवाको ह,त्या गरेको अभियोग लगाइएको थियो । नेपाली राजदूतावासका तर्फबाट भा,रतीय मुलकी अधिवक्ता करनजीत कौरले तेलीका तर्फबाट मु,द्दा लडेकी थिइन् ।
श्रोतः सत्यसमाचारबाट ।
इजरायलमा कोरोनाभाइरसबाट एक हजार बढीको मृत्यु भएपछि
जेरुसेलम – इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित झण्डै ४० वटा शहर बजारमा रात्रिकालीन निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) लगाइने आइतबार घोषणा गर्नु भएको छ । इजरायली वरिष्ट अधिकारीहरुको आइतबार अबेरसम्म घण्टौं चलेको परामर्श बैठकपछि उक्त निर्णय घोषणा गरिएको थियो । देशभर एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएपछि सरकारले नयाँ नियमहरु घोषणा गर्नु परेको हो । पछिल्ला दिनहरुमा इजरायलमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
यस्तो कफ्र्यु सोमबार राति ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म लाग्नेछ । तर यो कर्फ्यु कति समयसम्म जारी रहनेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । मानिसहरुलाई आफ्ना घरबाट ५०० मिटरभन्दा टाढा नजान र अत्यावश्यकभन्दा बाहेकका अरु व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न भनिएको छ ।
इजरायलले कोरोना नियन्त्रणका लागि शुरुमा अपनाएका विधिप्रति धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । तर मे महिनामा नियमहरुलाई खुकुलो बनाएसँगै नयाँ संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको विरोधमा भइरहेको साप्ताहिक प्रदर्शनका कारणले पनि संक्रमण फैल्याउन मद्दत गरेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण देखिन थालेको छ । सरकारले संक्रमण रोक्न राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्ने सोचाई पनि अघि सारेको छ । समग्रमा, इजरायलमा एक लाख ३० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् र अझै २६ हजारभन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित छन् । हाल प्रत्येक दिन तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले नियुक्त गर्नुभएका कोरोनाभाइरस परियोजना व्यवस्थापक डा रोन्नी गाम्जुको परामर्शमा सेनाले कोरोना संक्रमण रोक्न गत महिना एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । यसले मुख्य कार्य नै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क पहिचान गर्ने र संक्रमणको शृंखला रोक्ने रहेको छ ।
इजरायली अधिकारीहरुमाथि व्यवसाय र विद्यालयहरु चाँडै खोलिएको भन्दै जनस्तरबाट आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ ।
निषेधाज्ञाले बनायो निरीह : धादिङका गणेश भारी बोक्न नपापछि, घर धान्न सकस! (भिडियो)
फण्डिङको पीएचडीले मुखमा मास्क, शरिर निर्वस्त्र पारेर कहिलेसम्म अरुलाई गाली गरिरहने?
क्यानडाबाट आयो एक नेपाली बालककाे दुर्घटनामा निधनकाे दुःखद खबर
अनुमति पाए यूएईले नेपालीलाई काठमाडौं ल्याइदिने यस्तो छ तैयारी
चीनकाे उहानमा कोठाभित्र थुनिए नेपाली विद्यार्थी, भन्छन्, खानेकुरा सकियो, बाहिर जाने अवस्था छैन
राज्यको ढुकुटी रित्याएरै भएपनि ११ बालिकाको भविष्य अन्धाकार पार्दै परिषद (भिडियो सहित)
समयमा उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर, कतिपय परीक्षण आफैं पनि गर्न सकिन्छ (भिडियो हेर्नुस्)
जिता बरालले ट्र-मा सेन्टरमा गरेकाे यस्तो क्रियाकलापबारे आयो यस्तो खुलाशा! (भिडियो हेर्नुस्)
२ बर्षकि छोरीको लाश प्लास्टिकमा लपेटेर मोटरसाइकल लग्दै गरेको कारण खुल्दा दुनियाँकै आँखा रसायो